प्रियाले उत्पादन गरेको स्वदेशी स्यानिटरी प्याड ‘साथी’, ८४ विदेशी ब्रान्डसँग प्रतिष्पर्धा « Clickmandu
प्रियाले उत्पादन गरेको स्वदेशी स्यानिटरी प्याड ‘साथी’, ८४ विदेशी ब्रान्डसँग प्रतिष्पर्धा
प्रकाशित मिति : २६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार १०:४७
काठमाडौं । पाठेघरको मुखको क्यान्सरका कारण नेपालमा हजारौं महिलाको मृत्यु भइरहेको छ । क्यान्सर हुनुको एउटा कारण रहेछ स्वस्थकर स्यानिटरी प्याडको अभाव ।
सामाजिक कामका लागि मुलुकका विभिन्न ठाउँमा दौडिरहँदा प्रिया लामिछाने यो कुरामा जानकार थिइन ।
बर्दिया घर भएकी प्रिया युरासिया रेयुकाईमा २३ वर्ष जागिर खाँदै गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका विकट ठाउँमा पुगिन । त्यहाँ उनले देखेको ठूलो समस्या थियो, ‘महिनावारी हुँदा महिलालाई हुने सकस ।’
गाउँको विकट क्षेत्रमा सहरमा जस्तो स्यानिटरी प्याड थिएन । कतिपयले पुराना कपडा प्रयोग गर्थे, त्यो पनि अस्वस्थकर तरिकाले । जसले महिलालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर जस्तो समस्या निम्त्याइरहेको थियो ।
कामका सिलसिलामा विभिन्न जिल्लामा जाँदा हजारौं प्याड बोक्थिन । तर, कति दिनसम्म मागेर बाँड्ने ? उनलाई लागिरहेको थियो नेपालमै सबैको पहुँच हुनेगरी उत्पादन गर्न पाए !
त्यही सोँचलाई यथार्थमा बदल्दै प्रियाले सृजनशिल महिला उद्यामी प्रालि अन्र्तगत साथी ब्रान्डमा प्याड उत्पादन शुरु गरेकी छन् ।
बुधबार उनीसँग कुरा गर्दा यही स्यानिटरी प्याडको प्रचार र जनचेतना फैलाउन इटहरि पुगेकी थिइन ।
‘लामो संघर्षपछि स्यानिटरी प्याड उत्पादन शुरु गरेकी छु,’ माओवादी द्वन्द्वकालमा श्रीमान गुमाएकी प्रियाले भनिन्, ‘यसमा २ वर्षभन्दा धेरै लामो संघर्ष र दुःख गर्नुपरेको छ ।’
उनले साथी ब्रान्डको स्यानीटरी प्याड उत्पादन गर्न ८३ लाख रुपैयाँ यताउताबाट जोरजाम गरिन । त्यसैलाई लगानी गरेर बाजालु औद्योगिक क्षेत्र नजिकै सानो उद्योग राखिन । चीन र क्यानडाबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर पहिलो चरणमा ६० हजार प्याकेट उत्पादन गरी बजारमा पठाइसकेकी छन् ।
उनका अनुसार नेपालमा अहिले ८४ वटाभन्दा बढी स्यानीटरी प्याड आयात भइरहेका छन् । उनीले ती आयातित ब्रान्डसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने छ ।
‘अहिलेको बजारको भन्दा गुणस्तरीय प्याड हामीले उत्पादन गरिरहेका छौं,’ प्रियाले दाबी गरिन् ।
सरकारी मापदण्डअनुसार साथी ब्रान्डमा ४ वटा मोडलका प्याड उत्पादन भइरहेका छन् । २४४ एमएमको ८ पिस भएको प्याडलाई ६५ रुपैयाँ पर्छ । यो स्कुल पढ्ने किशोरीका लागि लक्षित गरेको उनले बताइन । यो विभिन्न पालिकाहरुले सरकारी विद्यालयमा वितरण गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, २४० एमएम ८ पिस, २८० एमएमको रेगुलरमा ६ र ३२० एमएमको फोल्डिङमा उत्पादन भइरहेको छ ।
उनले काठमाडौंबाहेक पोखरा, चितवन र इटहरिमा पनि आफ्ना शाखा कार्यालय राखेर १७ जना रोजगारी दिएकी छन् । मुलुकमै पहिलो पटक स्यानिटरी प्याड उत्पादन गरेकाले यसको प्रयोगका लागि विभिन्न ठाउँमा महिलालाई भेट्दै जानकारी दिँदै हिँडिरहेकी छन् । उनी झोलामा प्याड बोकेर विभिन्न ठाउँ पुग्छिन् ।
‘मुलुकभरका ४ हजार ३ सयभन्दा बढी महिलालाई भेटेर यसबारेमा जानकारी गराइसकेकी छु,’ प्रियाले भनिन, ‘खासगरी, अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारी, बैंक, तथा स्कुल कलेजका किशोरीलाई भेटिरहेकी छु ।’
भरतपुर अस्पतालका १४४ महिलालाई भेटिन । त्यस्तै, बानेश्वरका वाणिज्य बैंकमा पुगेर पनि आफ्नो प्याडको प्रयोगको लागि अनुरोध गरेको बताए । यसैका लागि उनी भरतपुर, इटहरिसम्म पुगेकी छन् ।
प्याड उत्पादन गर्न दुई वर्षको संघर्ष
महिलाहरु पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट प्रत्येक दिन दुईजना महिलाहरु मरिरहेको अवस्था थियो । जसको कारकमध्येको एक स्यानिटरी प्याड पनि थियो । विकट क्षेत्रमा महिला स्यानिटरी प्याड पाएका थिएनन् । यी क्षेत्रका महिनाको अवस्था कस्तो छ भनेर उनले स्न २०१४ देखि नै अध्ययन गर्न थालेकी थिइन ।
उनी युरासिया रेयुकाइमा काम गर्दा कर्णालीका विकट क्षेत्रदेखि पूर्वका विभिन्न ठाउँमा पुग्थिन । प्याडका रुपमा महिलाहरुले घरमा भएको कपडा प्रयोग गगरिहेका थिए । त्यसमा पनि उनीहरु लाज मान्थे ।
‘उनीहरुको स्वास्थमा गम्भीर असर परेको मैले अनुभव गरें,’ उनले भनिन्, ‘परिवारमा पनि माया पाइरहेका थिएनन् ।’
ती महिलाको पहुँचमा स्यानिटरी प्याड थिएन । बजारमा भएको पनि महंगा थिए ।
उनी एकपटक कामको सिलसिलामा रोल्पा र जुम्ला पुगेकी थिइन ।
‘हामीलाई केही प्याड ल्याइदिनुस् न,’ त्यहाँका महिलाहरु भनेका थिए, ‘हामीले अहिलेसम्म देख्न पाएका छैनौं ।’
उनलाई ती महिलालाई केही सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । काठमाडौंका मेडिसिटी, वीर, टिचिङ अस्पताल पुगेर भनिन्, ‘म सामाजिक काम गर्छु । यी ठाउँमा प्याड लगिदिनु छ । उपलब्ध गराइदिनु पर्यो,’ उनले आग्रह गरिन ।
अस्पतालहरु सहयोग गर्न सहमत भए । उनले १०–१५ बोरा प्याड बोक्दै विकट क्षेत्र लाग्दै गरिन ।
‘जहाँ–जहाँ प्याड पाइन्थ्यो, त्यहाँबाट सहयोग लिएँ,’ उनले भनिन् ‘काठमाडौंका झन्डै दुई दर्जन अस्पतालबाट सहयोग पाए । संयुक्त राष्ट्र संघ नेपालले पनि सहयोग गर्यो ।’
‘कति समयसम्म मागेर प्याड बाँड्ने त ?’ उनलाई लाग्यो, ‘अब आफै उत्पादन गर्नुपर्छ ।’
त्यसपछि उनी नेपालमा स्यानिटरी प्याड उत्पादन कस्तो छ भन्ने अध्ययनतर्फ लागिन । त्यसका लागि विभिन्न ठाउँसम्म पुगिन ।
‘मुलुकभित्र स्यानिटरी प्याड उत्पादन भएको खासै देखिँन,’ उनले भनिन्, ‘होम प्याड थिए तर ती स्वस्थकर थिएनन् ।’
सन् २०१८ मा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका पाइन । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसहित उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा, उद्योगमन्त्री महेश बस्नेत, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा थिए ।
बागमति प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए । कार्यक्रममा १ हजारभन्दा धेरै युवाहरुका भेला भएका थिए ।
कार्यक्रममा मुख्य उद्देश्य थियो युवाहरुलाई उद्यमशिल बनाउने र त्यसका लागि सरकारले कर्जासहित अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने । त्यस कार्यक्रममा १७÷१८ जना युवाले आफ्नो कुरा राखे ।
त्यही कुरा राख्नेमा थिइन, प्रिया पराजुली । उनले भनिन्, ‘मैले स्वदेशी प्याड उत्पादन गर्न चाहन्छु । त्यसका लागि तालिम लिएर र पछि अन्य महिलालाई तालिन दिन चाहन्छु । सरकारले सहयोग गर्नुपर्यो ।’
उनको प्रस्तावलाई स्टेजमा रहेका मन्त्रीदेखि सचिवसम्मले राम्रो माने । त्यहीँबाट प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने निर्णय भयो ।
‘कम्पनी दर्ता गरेर आउनुस् हामीले औद्योगिक क्षेत्रभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउँछौं,’ तत्कालीन उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले भनिन् ।
सरकारको सहयोगमा विदेशमा अवलोकन गर्ने, पीपीपी मोडलमा उत्पादन गर्न बजेट बिनियोजन गर्ने भनेर बागमति प्रदेशका मन्त्रीले भने ।
त्यति आश्वासन पाएपछि अर्को दिननै भक्तपुरमा सृजनशिल महिला उद्यमी प्रालि दर्ता गरिन । समितिमा २९ जना महिला सदस्य सहभागी भए ।
उनी सरकारको सहयोगका लागि मन्त्रालय धाउन थालिन । उद्योग मन्त्रालयले भारतमा प्याड उत्पादनको अवलोकन गर्न पठाउने भनेको थियो तर त्यो आश्वासनमात्र भयो ।
पछि उनीहरुले चीनमा गएर अध्ययन गर्ने भनेर धेरै पहल गरे । नेपालका लागि तत्कालीन चीनका राजदूत लिलामणि पौडेलसँग पनि कुरा गरे । तर, सहयोग भएन ।
उनीहरुसँग प्याड उत्पादन कसरी गर्ने, कति खर्च लाग्छ भन्ने जस्ता अनुभव थिएन । जसोतसो गरेर सन् २०१९ को डिसेम्बरमा आफ्नै खर्चमा ७ जनाको टोली चीन पुगिन ।
त्यहाँबाट उनीहरुले धेरै कुरा थाहा पाए । उनको योजनाअनुसार स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने हो भने ८ करोड लगानी चाहिने निष्कर्ष आयो ।
लगानीका लागि ठूलो रकम चाहिने भयो तर केन्द्र सरकारबाट आवश्वासनअनुसार सहयोग भएन । पछि उनीहरुले बागमति सरकारबाट पीपीपी मोडलमा काम गर्ने योजना बन्यो । त्यसअनुसारको निर्देशिका पनि तयार भयो ।
निर्देशिकाअनुसार जम्मा लगानीको ४९ प्रतिशत अर्थात पौने चार करोड लगानी प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने भयो । बजेट पनि पास भयो । बजेट पारित हुँदा सेयर सदस्यको रकम खातामा ८० लाख रुपैयाँ थियो ।
बिडम्बना, त्यहीबेला कोरोना भाइरसको संक्रमण शुरु भयो । एक वर्ष कुनै काम भएन । प्रदेश सरकारले पारित गरेको बजेटसमेत निकासी गरेन ।
‘यो वर्ष बजेट नआउने भयो अर्को वर्ष मिलाइदिन्छौं,’ मन्त्रालयबाट भन्न थाले ।
उनको मन बेचैन भयो ।यता बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र पनि जग्गा पनि पाउन सकेनन् ।
‘त्यस क्षेत्रमा जग्गा पाउनु भनेको महाभारत हुँदो रहेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘वर्षौंदेखि राजनीतिको भरमा ठाँउ ओगटेका छन् तर उद्यमी गर्नेलाई ठाउँ रहेनछ ।’
त्यो बेलासम्म स्यानिटरी प्याडलाई सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा राखेको रहेछ । भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि उनीहरु कार्यविधि परिवर्तन गरेर स्वाथ्य क्षेत्रमा ल्याउन पहल गरे । कार्यविधि परिवर्तन पनि भयो ।
सन् २०१८ देखि २०२० सम्म आइपुग्दा टीमका साथीहरु अस्तव्यस्त भइसकेका थिए । उनीहरुले सेयरको लागि राखेको २–४ लाख पनि बैंकमा फ्रिज भएको थियो । कार्यविधिअनुसार उनीहरुले त्यो रकम प्रयोग गर्न पाउँदैनथे ।
‘सरकारले सहयोग पनि गरेन, जग्गा पनि पाइएन, हामीले हालेको पैसा पनि प्रयोग गर्न पाइएन,’ ती महिलाहरुले केही सीप नलागेपछि भने, ‘हामी अहिले कम्पनीबाट निस्कन्छौं । पछि राम्रो भयो भने फेरि आउँला ।’
अन्ततः २९ जना साथीहरु कम्पनीबाट निस्किए ।
‘यो वर्षमा नभए अर्को वर्ष होला,’ साथीहरु कम्पनीबाट निस्किदै गर्दा प्रियाले सोचिन ।
त्यसपछि उनले एक्लै कम्पनी अगाडि बढाइन ।
उनीसँग लगानी गर्ने ठूलो रकम थिएन । करोडको ठाउँमा लाख लगानी गरेर लाखको ठाउँमा हजार उत्पादन गर्ने रणनीति बनाइन । उनी पैसा जुटाउनतर्फ लागिन । मुक्तिनाथ विकास बैंकमा उनले आफ्नो आइडिया सुनाइन ।
‘१ करोड लगानीमा यो काम गर्न लागेको छु,’ बैंकमा उनले योजना सुनाइन, ‘मलाई ऋण सहयोग गर्नुपर्यो ।’
बैंकले १५ लाख रुपैयाँ ऋण दिने भयो । बालाजी सहकारीबाट ११ लाख रुपैयाँ अर्को ऋण लिइन । ९ लाख रुपैयाँ विभिन्न ठाउँबाट आएको डोनेसन थियो । साथै, उनले परिवारबाट १२ लाख रुपैयाँ जुटाइन ।
कूल ८३ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेर अन्ततः उनले ‘साथी’ ब्रान्डको स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्न सफल भइन । विदेशबाट अझै केही मेसिन आउन बाँकी छ । ती मेसिन आएपछि धेरै उत्पादन हुने उनी बताउँछिन् ।